Etazonia : Ny Làlana Lavitr’ezaka Mankany Amin’ny Fandriampahalemana Araka An’i Aung San Suu Kyi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Oktobra 2012 2:59 GMT
Aung San Suu Kyi [fr], endrika malazan'ny fanoherana Birmana sady nahazo ny loka Nobel ho an'ny Fandriampahalemana, dia nahazo ny loka Vaclav Havel avy amin'ny Human Rights Foundation, ho fankasitrahana fisintahana iray miharo famoronana, ao anatin'ny sehatry ny Freedom Forum tao San Francisco, izay natao ny 28 septambra tany amin'ny Bently Reserve.
Nisy olo-manan-kaja hafa ihany koa teo. Isan'ireny ry George Ayittey, profesora, teratany Ganeana, izay nanao fanakianana mahery vaika ho an'ireo afrikana mpanao didy jadona, tamin'ny nilazàny fa « ho an'ny mpanao jadona tsirairay izay aongantsika, dia misy iray indray mipoitra, sahala amin'ny manao lalaon'ny fangalam-piery». Nampiany fa « ny mpanao jadona tsara indrindra dia ny mpanao jadona maty ». Tao ihany koa i Manal Al-Sharif [fr], avy any Arabia saodita, izay nizara ny trangam-piainany. Nihantsy ny fitondram-panjaka saodiana izy tamin'ny nandraisany ny familiana fiara iray, nefa ny vehivavy tsy mahazo alàlana hamily fiara. Nofaranany tamin'ny lahatsary Bad Girls an'i M.I.A ny fandraisam-pitenenany, lahatsary notontosaina hanohanana ny tolony araka ny filazany.
Ny anjaran'ny amerikana-latina dia avy amin'i Ethan Nadelmann, talen'ny Drug Policy Alliance izay nitehaka ireo fandraisana anjaran'ny filoha meksikana, kôlômbiana ary goatemalteka, nandritra ny Fihaonambe farany nataon'ny Firenena Mikambana, izay niantsoan'ireo filoha telo ireo ny tokony hamerenana mijery ny politikan'ny ady atao amin'ny zava-mahadomelina tsy nahomby sy namoizana ain'olona an'aliny nandritra ny efapolo taona farany teo.
@matissebh: Ilàna fifankatiavana ny làlana lavitr'ezaka mankany amin'ny fahafahana : Aung San Suu Kyi, matokia ahy…
@weddady: George Ayittey : “ny roapolo amin'ireo firenena avy any amin'ny faran'ny fandaharana, raha resaka fandrosoana arak'olona, no nosimbàn'ny fitondràna miaramila”.
Bint Battuta (@BintBattuta87) koa nampanàko ireo tenin'i Manal Al Sharif :
@BintBattuta87: i @manal_alsharif dia manonofy Arabia saodita ahitàna reny tsy mila intsony ny fahazoan-dàlana avy amin'ny zanany lahy mba hahafahana mitety tany. #SFFF Amen.